Movement For Democratic Change - Official Website - ZEC must stamp its authority
The MDC would like to call upon the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to immediately take action to ensure that people are not forced and commandeered to attend these Zanu PF political rallies. This state of affairs doesn't bode well for the holding of free and fair elections in 2018. The people of Zimbabwe are still being intimidated and threatened with death and/or some other such grievous consequences if they refuse to attend these Zanu PF rallies that are being addressed by Mugabe countrywide. There is a pervading atmosphere of fear that is still being felt throughout the country as the toiling masses of Zimbabwe are being driven like lambs to the slaughter, to attend Zanu PF rallies.
Zimbabwe remains in a deepening and debilitating political and socio - economic crisis and as such, both the regional and international communities cannot fold their arms and watch as the situation in Zimbabwe spirals out of control ahead of make or break elections in 2018.
The MDC remains confident, however, that it will easily roam to victory in next year's elections and form the next government if the climate of fear presently obtaining in Zimbabwe is rectified as a matter of urgency. We urge Zimbabweans to remain resolute and determined to vote the evil and rapacious Zanu PF regime out of power in next year's elections.